Akụkọ - Gbasara ihe nkiri na - eme ka nkwakọ ngwaahịa rụọ ọrụ nke ọma
Ihe nkiri a na-agbatị na-egosipụta ọdịdị dị mfe nke ngwaahịa ahụ, na mmezi nke mbụ na-enye mmezi nke ngwaahịa ahụ. Iji mezuo nzube nke uzuzu, mmanu mmanu, ihe na-eme ka mmiri ghara igbochi, mgbochi mmiri na mgbochi ohi, ihe kacha mkpa na-agbatị ihe nkiri na-eme ka ihe ndị ahụ na-akwakọba nke ọma na-egbochi ike na-enweghị ike imebi ihe ndị ahụ. Nke a abụghị ikpe na nkwakọ ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa, teepu na ihe nkwakọ ngwaahịa ndị ọzọ. Mere ya.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji ihe nkiri gbatịrị agbatị n'ọtụtụ ebe. A na-emepụta ihe nkiri gbatịrị agbatị site na usoro nkedo co-extrusion atọ, ma jiri polyethylene dị larịị na-ebubata dị ka isi ihe. Ndị ọrụ ntanetị dị iche iche nke ngwaahịa ahụ erutela ọkwa mba ụwa, ma nwee uru nke mpịakọta ihe nkiri edo edo, arụmọrụ dị mma, mmezi siri ike, nghọta dị elu, ike akwa akwa na njide onwe onye na ime ụlọ. A na-ebipụ ọkpụrụkpụ ihe nkiri site na 15μm ruo 50μm na obosara site na 5cm ruo 100cm. A na-ekewa osisi ahụ n'otu ụzọ na-esote ya na ọnụọgụ abụọ. A na-ejikarị ya eme ihe na nkwakọ ngwaahịa na ngwugwu pallet dị iche iche na ihe owuwu ụlọ, kemịkalụ, iko, seramiiki, elektrọnik, ígwè, akụkụ akpaaka, wires, akwụkwọ, mkpọ, mkpa kwa ụbọchị, nri na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, iji nweta mmiri, uzuzu- akaebe, belata oru ma melite arụmọrụ Na nsonaazụ mbenata ụgwọ.
Ihe nkedo ihe nkiri na-eme ka ihe ederede meputa ihe di iche iche nke na-anaghi ewere ohere. Ejiri ngwugwu mechie ngwaahịa ahụ ma jiri ya mee ihe site na enyemaka nke ike ndọpụ nke ihe nkiri gbatịrị agbatị. The ngwaahịa trays na-tightly ọbọp ọnụ, nke nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie ngwaahịa si misalignment na ije n'oge njem. Enwere ike ịgbatị ihe nkiri a na-agbatị agbatị ebe ike ịgbatị agbatị nwere ike ime ka ngwaahịa ndị siri ike na-agbaso ngwaahịa ndị dị nro, ọkachasị Ọ bụ nsonaazụ nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche na ụlọ ọrụ ụtaba na ụlọ ọrụ textile.
Nwere ike belata ọnụahịa ojiji, jiri eserese eserese maka nkwakọ ngwaahịa. Ojiji nke eserese eserese bụ naanị ihe dị ka 15% nke igbe igbe mbụ, ihe dịka 35% nke ihe nkiri na-ekpo ọkụ ọkụ, yana ihe dịka 50% nke ngwugwu katọn. N'otu oge ahụ, ọ nwere ike belata ike ọrụ nke ndị ọrụ, melite nrụpụta nkwakọ ngwaahịa na njiri nkwakọ ngwaahịa.